भाषण हैन ओली, अब डेलिभरि ! –कृष्णमुरारी भण्डारी - Sadrishya
भाषण हैन ओली, अब डेलिभरि ! –कृष्णमुरारी भण्डारी
: 3,655 views
ओली, तिमीले यतिखेर सबैथोक पाएका छौ । अब पाउन बाँकि केही छैन । देशकै इतिहासको शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री छौ । नाफाको जिन्दगी छ । युवराज–युवराज्ञीले फसाउलान् भन्ने छैन । पत्नीलाई वडामहारानी बनाउनु पनि छैन । त्यसैले अर्जुन दृष्टि डेलिभरिमा केन्द्रित गर ओली ।
पाश्चात्य दन्त्यकथाको रौं जत्तिकै मसिनो धागोमा झुण्डिइरहेको तरबारमूनि सुतिरहेको शासकको जस्तै अवस्था नेपालमा पनि शुरु भएको छ । पूर्वीय लोक कथाहरुमा बावियोको पोयोमा झुण्डिएको घट्ट मूनि सुतिरहेको महत्वाकांक्षी शासक जस्तै आधुनिक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दिन यात्रा शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट नेपालकै इतिहासमा पहिलो पल्ट तीन चौथाई बढी मत पाएका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसले संसदमा दुबै पटक झिनो बहुमत मात्र प्रदर्शन गरेको थियो तर कांग्रेसकै कारण दुबैपटक उसले पूरै कार्यकाल शासन संचालन गर्न सकेन ।
धेरै अघि २०१५ सालमा भएको प्रथम आमनिर्वाचनमा भने वीपी कोइरालाले दुई तिहायी मत पाएका थिए तर ०७४ सालमा केपी ओलीले पाएजति अझै होइन । वीपी नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री त बने तर उनको शासन अठार महिना मात्र टिक्न सक्यो । सैनिक लगाएर राजा महेन्द्रले वीपीलाई २०१७ सालमा पदच्युत गरे । तीस वर्षसम्म राजाको निरंकुश एकदलीय पंचायती शासन लादियो ।
राजतन्त्र विस्थापित भएर गणतन्त्र बनेको नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले ०७४ सालमा अभूतपूर्व समर्थन पाएका छन् । उनी संसदमा तीन चौथायी मत पाएर प्रधानमन्त्री अनुमोदित भएका छन् । यो लरतरो समर्थन होइन ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा पाएको विश्वासको मतले ओलीमाथि अपूर्व दायित्व थपेको छ । यसको अर्थ हो, उनलाई अब शासन गर्न सजिलो छैन । फुकीफुकी पाइला चाल्न सक्नुपर्छ अन्यथा अहिले प्राप्त समर्थनको चाङ्ग कुनै पनि बेला गल्र्याम गुर्लुम हुन सक्छ, यदि उनले वाइपंखी घोडाको रफ्तारमा काम गरेर देखाउन सकेनन् भने !
सोमवार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीका लागि विश्वासको मतदान हुनु अघि सदनमा भेला भएका सांसदहरुलाई मात्र होइन, प्रत्यक्ष टेलिभीजन प्रस्तुतिले गर्दा संपूर्ण जनताले प्रतिपक्षका नेताको आलोचना र सत्तापक्षका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीको संबोधन हेरे–सुने । विगतको संसदीय जुहारीको तुलनामा यसपटकको प्रस्तुति सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको नित्तान्त भिन्न देखियो । उनीहरु विकासको इस्युमा केन्द्रित थिए ।
तर, तत्काल सामाजिक संजालमा आएका प्रतिक्रिया र टिप्पणीले संसदीय बिजीनेशलाई पहिला जस्तै जुहारीतर्फ मोड्न भरमग्दुर प्रयत्नहरु भैरहेको देखिएको छ । पत्रकार, बिचौलीया, बुद्धिजीवी र जोरीपारी आगोमा घ्यु थप्न कम खप्पिस छैनन् ।
एकअर्कालाई उचालेर खसाउन सामाजिक कुरिती, पछौटेपन र स्थायी प्रतिशोध लिनेहरुको पहाड आगामी दिनमा उचाल्न खोजीने छ नै । तर ओलीको चुस्तता समस्याका पहाड खडा गर्नेहरुकै अगाडि सुरुङ्ग खनेर फुत्त पारी निस्किए भने मात्र सावित हुने छ ।
उनले यसमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ किनभने विश्वासको मत एकत्रित गर्न उनले प्रधानमन्त्री भएको तीन सातामा जुन सकारात्मक माहौल बनाउन सके त्यसले उनको ‘करिष्मा’ राम्रैसंग प्रदर्शन भएको छ ।
जुन मधेशी पार्टीहरुका नेतालाई ओलीको जानी दुष्मन मानिन्थ्यो, तिनले पनि ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । यसका लागि गहन वार्ता र संवाद मधेशी नेताहरुसंग ओलीले गरे त्यसले समस्यासंग भाग्ने होइन, त्यससंग लाप्पा खेल्ने कुटनीतिक चातुर्य ओलीसंग कति रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
यो कुरा किन चर्चा गरिएको हो भने ओलीलाई प्रतिपक्षलगायत यहाँका स्वनामधन्य बुद्धिजीवी र आलकाँचा राजनीति गर्नेहरु मधेश विरोधीको रुपमा व्याख्या गर्दथे । प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा संसदमा संबोधन गर्दा सांसद गगन थापाले धोतीको चर्चा पनि गरे तर ओलीले जुन जवाफ संसदमा दिए त्यसले उनमा रहेको परिपक्वता र जिम्मेवारी दुबै झल्कियो ।
तर ओली बोलीले मात्र होइन, बोलेको कुरा कार्यान्वयन गरेर किनाराका जनता जनार्दनसम्म समयमै पुग्न सकेनन्, सानातिना बाधा अवरोधमै अलमलिए भने यिनलाई पाइलै पिच्छे अप्ठेरो पार्न दत्तचित्त बिच्छी, काँडा, लिसोले अगाडि बढ्नै नदिएर नारायणहरि बनाइ दिन सक्छन् ।
त्यसैले ओली अब कुरा होइन, गर्छु भनेका काम शुरु गर र बेलैमा तिनलाई फत्ते गर । काम, काम र काम नै हो तिमीसंग जनताको अपेक्षा । तिमीले साँच्चिकै काम गर्न थाल्यौ भने तिम्रो मधुमासको सय दिनले नै ‘मर्निङ्ग सोज्स द डे’ गराउने छ । काँडा र लिसोको अवरोध स्वत: फाँडिने छ ।
आफूले गर्छु भनेर जनतासमक्ष वाचा गरेका काम सम्पन्न गर्न लाग ओली, तिमीलाई देश, जनता र अब त जनप्रतिनिधिहरुले पनि अभूतपूर्व रुपमा साथ र समर्थन मात्र होइन सबै कुरा सुम्पिएका छन् । विश्वासको मत प्रकट गर्दा सोमबार यसको प्रदर्शन पनि भयो । तिमीले कागज हेरेर होइन, आफू अगाडि उपस्थित सांसदहरुको अनुहार हेरेर बोल्यौ । आफ्ना पार्टीका नेता मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरु अगाडि तिमी राजनेताको रुपमा बोल्यौ । सदनले तिमीलाई स्वीकार गरेर मत पनि दियो अब गर्न बाँकि भनेको तिमीले गरेर देखाउनु मात्र हो । अलमलमा नपर, अगाडि बढ ओली । त्यसपछि तिमी हरेक सांसदसंग आँखा जुधाएर बोल्न सक्छौ !
तिमीले यतिखेर सबैथोक पाएका छौ । अब पाउन बाँकि केही छैन । देशकै इतिहासको शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्री छौ । नाफाको जिन्दगी छ । युवराज–युवराज्ञीले बदनाम गराउलान् भन्ने छैन । पत्नीलाई वडामहारानी बनाउनु पनि छैन । आसेपासे मन्छिनु पनि छैन । त्यसैले अर्जुन दृष्टि डेलिभरिमा केन्द्रित गर ओली ।
एक मिनेट नरोकिइ गाडी कुदाउ ओली ! तिमी हाइवेमा पुगी सक्यौ । तिमी देश हाँक्ने गाडीका ड्राइभर हौ, गाडीका सबै अवयवलाई पूर्ण गतिमा संचालन अनि परिचालन गर । तिमीले स्पीड लिन सकेनौ भने समयमा डेलिभरि गर्न सक्दैनौ ।
व्यवस्थापनका एक प्राध्यापकले भने, संसदबाट तीन चौथाई बढी मत पाइसकेपछि ओलीले व्यापक रुपमा जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक मन्त्री र कर्मचारीलाई यसरी चलाउन पर्छ कि जसको जे जिम्मेवारी हो, उसले तोकिएको समयभित्र गरेर देखाउनै पर्छ । जस्ले गर्न सक्दैन, एक मिनेट पनि नालायकलाई पदमा बस्न दिनुहुदैन । हजारौं काविल व्यक्तिहरु ओलीले गर्जन गरेको देश बनाउने महायज्ञमा साथ दिन लामबद्ध भएर पालो पर्खिरहेका छन् ।
फलाम रातो र तातो छँदै विश्वकर्मा दाइले घनले हिर्काएर जसरी चाहिएको औजार र भाँडाकुँडा बनाउछ, ओलीले पनि विश्वासको मत पाएको क्षणदेखि राज्य संयन्त्रलाई दिशा दिनसक्नु पर्छ । जब जनताले ओलीको चमत्कार देख्ने छन्, त्यसपछि देशभर विकासको माहौल बन्ने पक्का छ ।
हरेक मन्त्री कहाँ पुग प्रधानमन्त्री ! काम गरिरहेको ठाउमा पुग । प्रत्येकबाट समयमै डेलिभरि गराउने वातावरण सिर्जना गर । जनताका कुरा सुन ! लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्न लाग । आरोप प्रत्यारोप होइन, मुलुकलाई सहिष्णु, मेलमिलाप, एकआपसमा सहयोग र लोकतान्त्रिक शान्तिको आवश्यकता छ । दोषिलाई दण्ड र असललाई पुरस्कार दिने शुरुवात गर । अब भाषण होइन ओली, डेलिभरि गर !
विश्वासको मत माग्नु अगाडि ओलीले जसरी निष्पक्ष र निस्वार्थी भएर बोले, त्यसबाट उनले राजनेताको छनक दिइसकेका छन् । धिपधिप गर्दै बलिरहेको टुकीको सुतली सेफ्टी पिनले उचालेर ओलीले बत्तीलाई जसरी तेजिलो बनाए अब उनले त्यो तेजलाई घट्न दिनु हुँदैन । यसैमा उनको भविष्य अडेको छ । सुतली तानेर मात्र डिविया लामो समयसम्म बल्दैन, त्यसमा मट्टितेल पनि हाल्नुपर्छ तबमात्र त्यो महादीप बनेर सबैलाई उज्यालो दिनेछ ।